Ny antoka ananantsika - MOLONG TATTOO SUPPLY CO., LTD
Fiheverana matihanina, Fikarakarana matihanina
MOLONG fanaraha-maso kalitao manomboka amin'ny fidirana mankany amin'ny fandefasana
Manontany tena ve ianao hoe inona ireo vokatra tatoazy novidinao avy any Shina? Ao amin'ny MOLONG, na dia mbola tsy apetraka aza ny kaontinao na mpivarotra ambongadiny, mpaninjara, na olona izay vao mitady hividy gadget farany ity - ny vokatray dia mihodina ao anaty rafitra iray manamarina sy manara-maso ny kalitao avo roa heny, manomboka amin'ny loharano ka hatramin'ny fandefasana.
Amin'ity pejy ity:
Sourcing ny vokatrao
Fanodinana ny baikon'ny vokatrao
Fitsapana ny vokatrao
Manara-maso ny vokatrao
Taorian'ny nahazoanay ny fandoavanao vola (Tsy misy resaka fametrahana na fandoavana feno), dia mihetsika ny namanao ao amin'ny MOLONG ary manomboka manamboatra ny kaontinao avy hatrany.
Ny mpiasanay dia mandinika ny antsipirian'ny baikonao sy ny fikarakarana ny baiko. Ny varotra fifandraisanao dia hanaraka hatrany ny baikonao.
Na dia mpamatsy entana amina kalitao aza ny mpamatsy anay, dia tsy manararaotra ny filahanao manokana.
Ny vokatra rehetra dia mandalo fomba fanao QC feno:
Ny zava-drehetra dia alefa any amin'ny Ivon-toeran'ny Distribution Iraisam-pirenena voalohany izay misy ekipa mpanara-maso voaofana tsara manombana ny vokatrao mifototra amin'ny fepetra hentitra sy ny fepetra takiana amin'ny fizahana. Ary avo ny zavatra takinay: ny 80 isan-jaton'ny vokatra voafantina ihany no nomena ny fankatoavana tamin'ity dingana ity Alohan'ny hanombohantsika manangona entana dia manara-maso tsara izahay mba hampifanaraka tsara ny baiko.
Ny ekipan'ny Quality Control avy aminay manokana dia manome ny vokatrao fanaraha-maso hafa, anatiny sy ivelany, manaraka ny protokolola sy ny fepetra takiana.
Raha mifanaraka amin'ny fenitra ananantsika ny vokatra dia omenay azy ny fankatoavantsika. Vonona halefa aminao izao!
Fitsipika momba ny kaonty QC anay
Ny ekipa fonosana sy fanaterana MOLONG dia mihazakazaka toy ny famataran'ora, na dia milaza izany aza isika. Ny entana dia nojerena tsara foana raha misy lesoka amin'ny famokarana sy famolavolana alohan'ny fandefasana azy ireo hahazoana antoka fa ny entana izay nitiavanao an-tserasera dia ny zavatra azonao avy amin'ny irakay. Ny mpikambana ao amin'ny ekipanay dia mizaha taratasy fisoratana am-paosy miaraka amin'ny fanamafisana ny fividianana an-tserasera, ary avy eo avereno jerena ny vokatra nongotana avy eo amin'ny talantalana mba hahazoana antoka fa manamarina izany miaraka amin'ireo vokatra voatanisa.
Avy eo, ary avy eo, vao niroso tamin'ny famonosana ny baiko ny ekipa, ny fampitomboana avo roa heny (ary matetika kokoa) tamin'ny fonosana sy ny kasety.
Manaraka izany, mivoaka am-pelatanana am-pelatanana miaraka amin'ireo mpampita iraka voamarina sy voamarina isika.
Raha vantany vao miala eo am-baravarantsika ny vokatrao dia manohy manara-maso azy mandra-pahatongany any amin'ny anao. Ny ekipan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa MOLONG dia miasa ao ambadiky ny seho hatrany mba hamahana ny filanao sy ny fangatahanao rehetra. Izahay dia manara-maso ny fandefasana azy ireo amin'ny fotoana tena izy, ary afaka manampy anao hamaly ny fanontaniana rehetra ianao, na amin'ny mailaka, na chat mivantana, na amin'ny telefaona. Na inona na inona olana, dia eto foana izahay hanompo anao.
Mpanara-maso MOLONG miasa
Ny ekipanay matihanina dia miasa tsy an-kijanona mandritry ny famantaranandro mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny fenitra takiana sy mendrika anao ny vokatrao.